पी’डित राउटे युवतीको फेरि स्वास्थ्य परीक्षण गरिने ; के होला अब ? (भिडियो हे’र्नुस्) – Sadhaiko Khabar
पी’डित राउटे युवतीको फेरि स्वास्थ्य परीक्षण गरिने ; के होला अब ? (भिडियो हे’र्नुस्)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ समय: १८:००:२४
काठमाडौ / राउटे समुदायका दुई यु’वती माथि भएको घट’ना पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बाह्य व्यक्तिहरुलाई राउटे समुदायमा जान रो’क लगाएको छ । तर पनि प्रह’रीको आँखा छ’लेर राउटे बस्तीमा केही वाहिरका मानिस जाने क्रम भने देखिएको छ । एउटा युट्युव च्यानलका संचारकर्मीले राउटे वस्तीमा पुगेर घट’नाको बारेमा विशेष कुरा गरेको देखिन्छ ।
राउटे समुदायका युव’तीहरुमाथि भएको घट’ना बाहिरि’एपछि उनीहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रशासनले राउटे वस्तीमा अन्य व्यक्तिहरुलाई जान रो-क लगाएको हो । तर पनि वाहिरका ब्यक्ति उनीहरुको सम्पर्कमा जाने प्रयास भने जारी राखेको देखिन्छ । भिडियोमा युव’तीहरु माथि भएको घट’ना सार्व’जनिक भएपछि उनीहरुका बारेमा थप चा’सो बढेको छ ।
युट्युवर र भिडियो बनाउनेहरुको चासो झन् बढेको छ । उनीहरु राउटे समुदायको सम्पर्कमा जाने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अघिकारी छविलाल रिजालले राउटे समुदायका युव’तीहरुमा भएको घट’नापछि उनीहरुको सुरक्षाका लागि अन्य व्यक्तिलाई उक्त बस्तिमा जान रो’क लगाएको बताए । राउटे बस्तीमा बाहिरको व्यक्तिलाई जान नदिने र राउटे समुदायका युवायुवतीहरुलाई पनि जथा’भावी हिड्न नदिने गरी सुर’क्षाकर्मी समेत खटा’इएको उनले जानकारी दिए ।
उनीहरुलाई निग’रानी गर्नको लागि २२ जना प्र’हरी खटाइएको उनले बताए । पछिल्लो केही समयदेखि राउटेहरु सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–११, आँपसोतीको भेरी नदी किनारमा बस्दै आएका छन्। सोमबार विहानदेखि नै उक्त समुदायमा अन्य व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गर्न रो’क लगाएको रिजालले जानकारी दिए ।
राउटेहरुको आफ्नै नियम का’नुन हुने र त्यो निकै क’डा हुने भएकाले युवतीहरुको ज्या’न जो’खिममा परेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्या’नाकर्षण गराएको थियो । यस अघि पनि ति युव’तीहरु नजर’बन्दमा परिसकेका कारण उनीहरुको ज्या’न थप जो’खिममा देखिएको थियो । ईताजा खब’रबाट । हे’र्नुहोस् भिडियो :-
५. ओलीको अर्को अ’प्रिय कदमपछि रामकुमारी झाँक्री र योगेश भट्टराईले गरे यस्तो घो’षणा